Ulo bekee Crystal Bicone — Nkịtị bekee bụ Bicone kacha ewu ewu na ụdị niile. Bicone beads na-abata na ogo kachasị ukwuu nke agba na nsonaazụ yana nha asaa dịgasị iche. Uwe anyị Crystal Bicone beads dị nha 3mm ruo 10mm dị ugbu a.
Gburugburu klọd kristal — okirikiri beads na-enye ọmarịcha ihe niile na ịkpa ike ma na-eme ka ọkụ na-acha mara banyere ogo ha. Chaplet beads ndị a bụ otu n'ime agba bead shapes nke kachasị mma.Ohere buru ibu nke Roads beads gụnyere nha itoolu na nnukwu ụdị agba na nsonaazụ ndị ama ama.
Ibe aja bekee dị mma - kpụrụ chaplet bụ ọmarịcha n'ụdị dị iche iche ma ọ bụ dịka nkenke site na olu, ọla ntị ma ọ bụ ọla aka. N'ebe ọ bụla ị tinyere ha, ị mepụtara mmegharị n'ihe ịchọ mma gị ka anya na-adọta ogologo ha.
Certificatedị Asambodo O nweghi
Ebe Si Malite Hubei, China
Nọmba Model G180714023
Agba cha cha ihe karịrị narị mmadụ 100
Aha ahia Ibe aja aja kristal
Nha 2mm 3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm wdg
Ihe Crystal, Lampwork & Glass
.Dị Ibe Ihu
MOQ 100 Ala
Ike ọkọnọ: 100000 Strand / Strands kwa izu
Ime DIY kristal beads ọla Glass bicone bead
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa 2mm, 3mm 6000-6500 strands / katọn
4mm 4500 strands / katoonu
6mm 1500 strands / katoonu
8mm 1000 strands / katoonu
10mm 500 strands / katoonu
Oge nnyefe 3-15 ụbọchị
Chapleti Glass China Na Bulk ， N'ogbe Rondelle iko Crystal Beads Maka ịme ọla
* Maka chaplet square, anyị nwere ihe karịrị 100 agba na nha site na 2mm ruo 18mm
Iko / oriọna
2mm 3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm wdg.
Biko rụtụ aka na kaadị agba anyị
Mgbaaka mgbaaka mgbaaka Ọmụaka Ihe Mbepụ Dangle Ọdịmma ọla edo Set Set Pendant Charm
100 strands kwa agba n'otu nha
Nke gara aga: Ezi kristal mma mma gible - gila ahia k9 teardrop rhinestones kristal, nke kachasi nma nke ihe azu azu iko fancy nkume di ire ahia 3 ndi ahia - Jingcan
Osote: Bohemian ejiji ụdị bead ejiri mee Mens ọla mgbaaka ọla, akwa ọla mma mmachi mgbaaka
Ogba beads kristal
Ibe Iku Crystal
Iko Crystal beads